जसले ब’ला’त्का’र गर्यो उ’सै सँग बि’हे !:: Mero Desh
जसले ब’ला’त्का’र गर्यो उ’सै सँग बि’हे !
Published on: ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:२९
विराटनगर :मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका –७ का २२ वर्षीय यु’वकवि’रुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा ज’बर’जस्ती क”रणी सम्बन्धी जा’हेरी पर्‍यो। युवकले आफ्नै घरमा लगेर ब’ला’त्का’र गरेको भन्दै रतुवामाई नगरपालिकाकी २० वर्षीया युवतीले २०७७ साल असार १३ ग ते उनीवि’रुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। बिहे गर्छु भनेर २०७६ साल चैत २० गते ललाईफकाई ब’ला’त्कार गरेको भन्दै
पी’डि’ताबाटै जा’हेरी परेपछि प्रहरीले घ’ट’नास्थल मुचुल्का तयार पा’र्नेदेखि यु’वतीको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरेर घ’ट’नाको अनुसन्धान अघि बढायो। जाहेरी परेपछि फरार भएका युवक प”क्रा’उ परेनन्। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर हदम्यादभित्रै (२०७७ साल चैत ५ गते) मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले युवकलाई प्रतिवादी बनाउँदै
जिल्ला अदालत मोरङमा चैत १७ गते जबरजस्ती करणी मु’द्दा द’र्ता गर्‍यो। प्रतिवादी फरा र भएमा मु’द्दा बुझाउन प्रहरीलाई १ बर्से हदम्याद हुन्छ। मु’द्दा दर्ता भएपछि अदाल तले फरार प्र’तिवादीका नाममा म्याद तामेल गर्‍यो। उनी सुटुक्क अदालतमा हाजिर भ ए। न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानको इजलासले धरौटी बापत ५० हजार रूपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दियो।
ध’रौटी रकम बुझाएर युवक गत वैशाख ८ गते छुटेको अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए। उनका अनुसार विचा’राधीन मु’द्दाको किनारा लाग्न बाँ की छ । मु’द्दाको फैसलाका लागि अदालतले पी’डि’त यु’वतीसहित उनका पक्षका साक्षीहरुलाई यही असोज १३ गते बकपत्रमा उपस्थिति गराउन आदेश दिएको धमलाले बताए।
साक्षी बकपत्रको तयारीमा प्रहरी लागेको छ। तर घटनासँग एउटा फ’रक प्रसंग जोडिएको छ । प्रहरीमा जाहेरी र प्रभावमा पारेर पी’डितालाई ब|ला’त्का र आ ब’रो’पीसँग बिहे गर्न बाध्य पारिए को खुलेको छ। सुनवर्षी –७ का वडाध्यक्षन प्रकाश यादव का अनुसारन युवक धरौटीमा छुट्नुनभन्दा ७ महिनाअघि नै पी’डक पक्षको द’बाबमा ब’ला’त्कार ‘घ’टनाका पी’त र पीडकबीच बिहे गराइएको खुल्यो।
‘घ”ट’ना अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला राजनैतिक अगुवा, गाउँका भद्रभलादमी र पीडक पक्षको दबाबमा पीडकसँगै पीडित युवतीलाई बिहे ग र्न बाध्य पारिएछ,’ उनले भ ने, ‘कानुनी का”रबाहीबाट बच्नका लागि बिहेलाई ह’ति\_\_यार बनाउन खोजिएको देखिन्छ।’यादवका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी पर्नासाथ
यु’वक फ’रार भएपनि उनका परिवारका सदस्य र आफन्तले पी’डि’तालाई बिहेका लागि द’बाब दिएको पाइयो। युवक फ”रार भ एकै अवस्थामा उनका परिवारले पीडि’तलाई बु’हारी बनाएर भित्राएको यादवले बताए। तर अदालतबाट धरौटी रक न म बुझाए र युवक छुटेपछि परिवारले। युवतीला ई कु’ट’पिट गर्द यातना दिएर घरबाट निकालिदिएको उनको भनाइ छ।
युवती अहिले माइती मा छ न्। ‘दुई वर्षदेखि केटा र केटी प्रेम सम्बन्धमा रहेछन् । उनीहरुबीच शा”रीरिक स’म्पर्क पनि भएछ, ’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘केटा पक्षले बिहे गर्न नमानेको गुनासोपछि। वडा कार्यालयमादुई पक्षलाई राखेर छलफल गराइयो। छलफलमा केटा पक्ष।ले बिहे स्वीकार गरेन।’ पछि प्रहरीमा मुद्दा पुगेसँगै दुई जनाबीच
बिहे गराइए को आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। म आफ्नै श्रीमानल फ’साउ\_न हुँदैन भनेर परिवारकै दबाब मा पीडितलाई मु द्दा कमजो र बनाउ न लगाइएको यादव बताउँछन्। तर युवक छुटेपछि गरिएको भनेर युवती रुँ’दै वडा कार्यालयमा आइपुगेको जानकारी उनले दिए। कुरा बुझ्दा केटा पक्षले बुहारी स्वीकार गर्न र सँगै राख्न नसकिने भन्दै घ’र’निका’ला गरेको पाइएको यादवले बताए।
भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मु’द्दामा छलफल हुँदैन भनेर पी’डि’तलाई प्रहरीमा पठाइदियौँ । ’पी’डित यु’वतीकी आमाले बिहे गरिदिने भने र दबा ब आउन थालेपछि छोरी पनि विवाहका लागि रा जी भएको बताइन्। ‘केटो भारत तिर भागेको छ । बि हे भइसकेपछि आउँछ भनेकाले छोरी केटाकै घरमा गएर ६/७ महिनाजति बसि, ’ उनले भनिन्न , ‘तर केटा छुटेर आइसकेपछि छोरीलाई पत्नी स्वीकार गरेनन्।
अहिले माइतीमै आएर बसे की छ ’रतुवामाई– ५ का वडाध्यक्ष कन्हैयालाल राजवंशीले सुरुमा युवतीको सह’मतिवि’परीत शा’रीरिक स’म्पर्क गरेका युवकले पछि पत्नी स्वीकार नगरेको बताए। ‘मु’द्दा परेपछि चैँ सामाजि क परम्परा एवं रीतिरिवाजअनुसार बिहे भएछ,’ उनले भने, ‘तर अहि ले परिवा रै मिलेर युवतीलाई घरबाट लखेटेछन्।’ मु’द्दा पर्नुअघि वडामा छलफल गराउँदा केटा पक्षले केटीला ई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको राजवं शीको भनाइ छ।
‘घ’टना’बाट युवती पी’डित भएकै हुन्,’ उनले भने, ‘पटक–पटक न्याय माग्न आए पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ।’मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले पीडक र पीडितबी च बि हे भइसकेप छि ब’ त्का’र घ’ट’नाको अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको बताए। ‘घ’ट’ना प्रहरीमा आउनुअघि पनि विभिन्न चलखेल भएको पाइयो।
पीडककै श्रीमती बनेर पीडित गइसकेपछि अनुसन्धानमा निक्कै समस्या भयो, उनले भने, ‘घ’ट’ना विवरण कागज गराउँ दा पीडित पक्षबाट सहयोग भएन । अनुसन्धानमा युवतीले सहयोग गरुन्जेल पी”डकले प नि राम्रो व्यवहार गरेको र धरौटीमा छुटेपछि तिरस्कर गरेर घरबाटै निका लिदिए को खुल्यो।’ प्रहरीमा पुगेपछि ‘पी’डितलाई अनेक दबाब र प्रभावमा पारिँदा
घ”टनाको अनुसन्धान कमजोर हुने गरेको जीसीले बताए। युवती अहिले झन् ठूलो हिं’साको सिकार बनेको उनको भनाइ छ। एसपी जीसीका अनुसार घरमा जान केटा पक्षले नदिने र कु”टपिट एवं गा”लीगलौ’ज गर्ने गरेको गुनासो लिएर युवती प्रहरी कार्यालय आइन्। एक महिनाअघि प्रहरी ले केटासहित उनका दाजु र भाइ गरेर तीन जना विरुद्ध अ’भद्र व्य’वहार मु’द्दा पनि चलायो।
धरौटी बु झाएर तीनै जना छुटे। सुरुदेखि पीडितलाई बिहे गरेर क मजोर बनाइएको मु’द्दाको बकपत्र भने बाँकी रहेको जीसीको भनाइ छ। अधिवक्ता हेमराज पन्त पीडक माथिको कार’बा’ही कमजोर बनाउने उद्देश्यले पीडितसँग बिहे गराउनु कानुनी एवं सामाजिक हिसाबले पनि गलत भएको बताउँछन्। ‘घ’ट’ना नै तीन महिनापछि न्नप्रहरीमा पुगेको छ।
ब”लात्कार जस्तो घ’टना’मा का’र’बाही ढिलो सुरु हुँदा प्रमाणहरु लोप भइसकेका हुन्छन्,’ उनले भने ‘एउटा घ”टनाबाट पी’डित भइरहेकी युव’तीमाथि अर्को हिं’सा पनि भयो । जबरजस्ती क’र’णी हुँदा न्यायका लागि लड्नुपर्ने पी’डितले पीडकका घरमा गएर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। ’आवेशमा जाहेरी दिनेभन्दा पनि अन्याय भएको हो वा हैन
भनेर यकिन ‘गरेर’ मात्रै’ जाहेरी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आवेगमा निर्णय लिँ दा सामाजिक एवं कानुनी समस्या निम्तन सक्ने कुरा पीडित पक्षले ख्याल गर्नुपर्ने अधिवक्ता पन्त बताउँछ न्।जिल्ला न्यायाधीवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेलेन पीडितासँग न बिहे गर्दैमा अघिल्लो अ’परा’ध बाट पी’डकले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताए।
‘सहमतिविपरीतको शा’रीरि’क ‘सम्पर्क ब’ला’त्कार हो। बिहेलेमु’ द्दामा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘ब’ला’त्कारमा पी’डि’तको कुरा र बकपत्र ले विशेष अर्थ राख्छ। तर घ’ट’नाको बयानमै बिहे गर्न नमानेकाले मुद्दा हालेको बयान पीडितले दिएकी छन्।